တရုတ်မီးဖိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် Thermocouple - Aokai
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Thermocouple ဟင်းချက် > မီးဖိုအတွက် Thermocouple
မီးဖိုအတွက် Thermocouple ထုတ်လုပ်သူများ
မီးဖိုအတွက် Thermocouple နမူနာများငါစမ်းသပ်ရန်ငါ ၀ ယ်လိုသည်၊ ၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသလား။
ဟယ်လင်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခမဲ့နမူနာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်နောက်အမိန့်ရတဲ့အခါငါတို့နမူနာငွေတွေကိုမင်းဆီကိုပြန်ပေးလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏ငွေပေးချေမှုအပြီးတွင်မီးဖိုချောင်သုံး Thermocouple ကိုသင်မည်သည့်အချိန်တွင်ပို့ဆောင်လိမ့်မည်နည်း။
ဟယ်လင်: ငါတို့ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါငါတို့မှာမီးဖိုချောင်သုံး Thermocouple ရှိတယ်၊ မင်းဆီကိုအမြန်ဆုံးပို့မယ် (DHL/ UPS/ TNT/ DEDEX စသည်ဖြင့်)
၃၊ ၀ ယ်သူ၊ မီးဖိုအတွက် Thermocouple ကိုမည်သို့ပေးချေရမည်နည်း
ဟယ်လင်: အနောက်တိုင်းပြည်ထောင်စု၊ Paypal၊ ပုဂ္ဂိုလ်အကောင့်၊ TT စသည်။
1. အရည်အသွေးမြင့်ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ မတော်တဆဖြစ်ပျက်မှုများကိုကာကွယ်ရန် solenoid valve နှင့်အလုပ်လုပ်သည်၊ ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့များလောင်ကျွမ်းခြင်းပေါ်လာလျှင် Cooker အတွက် Thermocouple ကိုထုတ်နိုင်သည်။
၂. ၉၀၀ မီလီမီတာမီးဖိုချောင်သုံး Thermocouple အစိတ်အပိုင်း ၅ ခုနှင့်မီးဖိုချောင်သုံး
၅။ Cooker induction cooker၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖို၊ အပူပေးစက်နှင့်အခြားလောင်ကျွမ်းစေသောပစ္စည်းများအတွက် Thermocouple အတွက်သင့်တော်သည်။
ဤမီးဖိုအတွက် Thermocouple သည်အလျား ၁၅၀ စင်တီမီတာရှိပြီးမီးဖို၌မီးဖိုချောင်သုံးမီးဖိုချောင်အားလုံခြုံမှုရှိစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာဓာတ်ငွေ့မီးဖိုပေါက်ကွဲခြင်းမှပေါက်ကွဲစေနိုင်သောကြောင့်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ thermocouple ကိုဓာတ်ငွေ့ထိန်းညှိအဆို့ရှင်နှင့် တွဲ၍ မီးဖိုသို့ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။
မီးဖိုအစုံအတွက်ဤအမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သော Thermocouple သည်ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်များတွင်အသုံးများသော thread ၅ ခုနှင့်သင့်တော်သောကွဲပြားသော thread adapters ၅ ခုပါ ၀ င်သည်။
ဤကိရိယာတွင် thermocouple ထိပ်ဖျားအမြင့်ကိုချိန်ညှိရန်ထည့်သွင်းမှုနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
အကယ်၍ သင်၏လက်ရှိ Thermocouple for Cooker မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါကသင်၏မီးဖိုချောင်အားလုံခြုံသောအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်သင်လိုအပ်သောအရာဖြစ်နိုင်သည်။
Cooker အတွက် Thermocouple ဆိုသည်မှာ Grain Stabilized Furuya Platinum သတ္တုစပ်ကို Oxide အမှုန်များနှင့်မူရင်းအားဖြည့်ထားသော Platinum အလွိုင်းနှင့်အတူ Cooker METAL အတွက် Thermocouple မှတီထွင်ထားသောအောက်ဆိုဒ်အမှုန်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သည့်အောက်ဆိုဒ်ကိုထည့်ပြီးတစ်သားတည်းဖြစ်စေရန်ဖြန့်ဖြူးပေးသောပလက်တီနမ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Cooker များအတွက် Thermocouple ပါသောကျွန်ုပ်တို့၏သမားရိုးကျ Platinum သည်တစ်ခါတစ်ရံအင်အားနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုကွဲလွဲမှုကြောင့် ၀ ယ်သူများအားအပြည့်အဝမပေးချေ။
Cooker အတွက်သမားရိုးကျ Thermocouple နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအောက်ဆိုဒ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပိုရှည်သောစပါးပုံသဏ္န်ဘေးတိုက်ရှိသည်၊ ဤဇာတ်ကောင်များသည်တည်ငြိမ်သောခွန်အားနှင့်စက်ကိရိယာများကိုကြာရှည်ခံစေသည်။ Thermocouple for Dispersion dispersion for Platinum အားဖြည့်ထားသောအားဖြည့်ပလက်တီနမ်များကထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုတည်ငြိမ်မှုနှင့် ၀ ယ်သူများအတွက်ပိုမိုကြာရှည်ခံစေသည်။ တိုကျိုတက္ကသိုလ်၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်တီထွင်ထားသောစိတ်ဖိစီးမှုခြင်းခြင်းစနစ်၊ တိုကျိုတက္ကသိုလ်နှင့်စုဆောင်းထားသောနည်းစနစ်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံးသောဒီဇိုင်းများကိုအဆိုပြုနိုင်ရန်မည်သို့ကူညီပေးသည်ကိုသိပါ။ ဓာတ်ငွေ့အရင်းအမြစ် - NG/LPG/propane/butane
၂။ ၀ န်ဆောင်မှု: Cooker များအတွက် OEM Sinopts ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဓာတ်ငွေ့မီးဖို thermocouple ကိုလက်ခံပါ
3. အသိအမှတ်ပြုခြင်း: CSA, CE, ISO9001
၄။ စက်ပစ္စည်းများ: ဓာတ်ငွေ့မီးဖို၊ ဓာတ်ငွေ့သုံးအပူပေးစက်၊ မီးဖိုအပြင်အပူပေးစက်များအတွက် Thermocouple၊ volumetric ဓာတ်ငွေ့သုံးရေအပူပေးစက်များ
(၁) Cooker အတွက် Thermocouple
အပူအက္ခရာများ: မီးတောက်ပေါ်ရှိ thermocouple ၏အပူချိန်သည် ၆၀၀ မှ ၇၀၀ အေးသောအက္ခရာများ၊ မီးလျှံပေါ်ရှိ thermocouple ၏အပူချိန်သည် ၆၀၀-၇၀၀
(၂) အတွင်းခံ: ၎င်း၏အမျိုးအစားနှင့်အလျားနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့်သည်းခံမှုသည် irequested အရ +၁၀% ၁၀% ရှိသည်။
(၃) အရှည်: ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ
(၄) နဖူးနှင့်ဂိတ်: ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ
မီးဖိုအတွက် Thermocouple ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်
Cooker များအတွက် Thermocouple သည်ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုမှသွယ်ဝိုက်သောအန္တရာယ်မှကာကွယ်ပေးသည်။
သံလိုက်အတွက်အဆက်မပြတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ပေးသူအဖြစ် Cooker များအတွက် Thermocouple
မီးဖိုအတွက် Thermocouple သည်အပူစွမ်းအင်မှလျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်သို့ပြောင်းသည်။
Cooker အတွက် Thermocouple သည်မီးတောက်များကိုပြင်ပအချက်များကြောင့်မီးအားငြိမ်းသတ်သောအခါသံလိုက်အတွက်လျှပ်စစ်သံအားထောက်ပံ့ခြင်းကိုရပ်လိမ့်မည်။
ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုအတွက် Brass Wire Thermocouple Flame Sensor
၎င်းသည် 50000BTU ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သတ်မှတ်ထားသောဖိအားနည်းအဆို့ရှင်ဖြစ်ရန်လိုသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ မင်းရဲ့ system ကိုပြန်လာဖို့အမိန့်မချခင်ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းစက်ရုံကိုကြေးဝါယာကြိုး thermocouple flame sensor ကို ၀ ယ်ဖို့စိတ်ချပါ၊ ငါတို့ကမင်းကိုအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ်။ ရောင်းအား ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးခြင်း။
Magnet Valve အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအိမ်သုံး Thermocouple
၎င်းသည် 50000BTU ဝန်းကျင်ရှိအဆင့်နိမ့်သောဖိအားအဆို့ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး thermocouple နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်လိုသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လာခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်သင်၏စနစ်အားအတည်ပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှသံလိုက်အဆို့ရှင်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအိမ်သုံး thermocouple ကို ၀ ယ်ယူပါ။ ဖောက်သည်များထံမှတောင်းဆိုချက်တိုင်းကို ၂၄ နာရီအတွင်းအဖြေပြန်ပေးသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သည့်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလုံခြုံသောမီးဖိုချောင်သုံး thermocouple ကိုပေးလိုပါသည်။ ပြီးတော့ငါတို့ကမင်းကိုအကောင်းဆုံး after-sale service နဲ့အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်။
Thermocouple သည်အပူစွမ်းအင်မှလျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့စကားပြောသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သံလိုက်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ပေးသူအဖြစ်အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။ မီးအားပြင်ပအချက်များကြောင့်မီးအားထုတ်လိုက်ပါကသံလိုက်ဓာတ်အားပေးခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်၊ ထို့နောက်သံလိုက်ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်မှကာကွယ်ပေးသောဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်ကိုပိတ်လိုက်သည်။ မင်းအဲဒါကိုပိုနားလည်ဖို့ကူညီဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Aokai သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိပညာရှင် မီးဖိုအတွက် Thermocouple ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CE ထောက်ခံချက်ရရှိထားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့နမူနာကိုလည်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှစျေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးမြင့်အကြမ်းခံသောထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ မင်းငါတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ သင်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါ။ အလွှာပေါင်းစုံမှမိတ်ဆွေများလာရောက်လေ့လာရန်၊ လမ်းညွှန်ရန်နှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရန်လာရောက်ပါ။